Stainless Sheet, Umbala Stainless, Stainless Ikhoyili - Ferosteel
SS amaphepha zokuhombisa
SS elevator amaphepha / Door
Iphepha ethile steel stainless
Mirror impandla steel stainless umbala steel stainless steel stainless
emnyango ilifti sheets
Thina ubudlelwane ngamandla neenkampani elevator
Ukubonelela stainless steel screen, ipatishini kunye nezinye ukuzakhela nxamnye isicelo siqhele.
Bhrawuza ao imveliso ezintsha ezilandelayo ke thina
Isicatshulwa inkampani yethu
Foshan FEROSTEEL CO., LTD yasekwa ngo-2008 emva kweminyaka wophuhliso iinzame ezibambeneyo bonke abasebenzi, sinazo izixhobo engatyiwa epheleleyo imveliso zentsimbi kunye nokusebenza kunye noluhlu olubanzi lothungelwano ulwazi yorhwebo. amaqabane ethu ibekwe kwiindawo ezininzi zehlabathi. Uye waba unyango umphezulu steel stainless ezaziwayo-kakuhle ngobuchule kunye insimbi obuphezulu lweshishini lisiko apha eMzantsi China. inkampani yethu ijolise "ukwenza ihlabathi ezimibalabala ngakumbi" ukunika iinkonzo zethu kunye neemveliso ezisemgangathweni ngeenkonzo zobungcali. Sibe nenkqubo inkonzo epheleleyo uphando lwezenzululwazi, uyilo, imveliso, uvavanyo kunye nezinye unyango umphezulu lwepolitiki ukutyabeka, electroplating, nesingxobo amanzi, sandblasting, ngasekhohlo, izithombe, kunye zokuzoba.
efektri yethu iye yasungula inkitha enkulu kunye naphakathi nesingxobo ezincamathelayo oluzenzekelayo, iwelding wokucoca, welding steel stainless kunye nezixhobo ipolishi. processing ejulile insimbi iimveliso ezahlukeneyo uhombiso zobunjineli.
Olululo, iqela leengcali intengiso aphesheya usoloko expanding.To ukwenza isithuba zophuhliso ukuphucula ixabiso lwabasebenzi, ukuphucula umgangatho life.We bebesoloko babekholelwa ukuba "umsebenzi ngakumbi kakhulu, ubomi sonwabe ngakumbi."
Lwedilesi: A38-40, Building NO.5, Tancun 1 Road, Chencun, Shunde, Foshan, China